Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Qardho | puntlandi.com
Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Qardho
Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha, Eng, Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey ayaa saakay waaberigii gaaray magaalada qardho ee xarunta gobolka Karkaar.
Madaxweyne Camey ayaa saaka halkaas ka daah furaya imtixaanka shahaadiga ee fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe iyo kuwa afaraad ee dugsiya sare, waxaana ku wehliya wasiirka waxbarashada dowladda Puntland.
Imtixaankii Shahaadiga ayaa waxaa fariisanaya dhamaan arday tiradoodu ay gaarayso 12,687 arday, waxayna imtixaanka ku kala galayaan 86 xarumood oo ku kala firirsan 9ka gobol ee ay Puntland ka kooban tahay.
Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa dhammaan ardayda u fariisanaysa imtixaanka Shahaadiga ah ee Puntland usoo gudbisay hambalyo ay ku larantahay duco,waxayna uga baryayaan inuu ku guuleeyo imtixaanka ay u fariisanayaa maanta oo sabti ah.
Waxaaan ardayda kula dardaarmayaa inay imtixaanka si degan ku galaan, kuna kalsoonaadaan aqoontii ay sanadaha badan soo baranayeen, imtixaanku waa qiimayn, ciqaab maaha, waana imtixaan aad haddii Alle idmo si wanaagsan oo raaxa leh uga jawaabi doontaan, marka ha warwarin, naftaadana kalsooni gali,” ayuu yiri wasir ku xigeenka waxbarashada Punrland dr. Maxamed cali Faarax.